Imeko yokuThengisa ngokuKhangela kwi2015 | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 20, 2015 Douglas Karr
Ndisandula ukuthetha neqela endiye ndaphinda ndamenywa ukuba ndibuyele kulo kwiminyaka emi-5 edlulileyo. Ngexesha elinye kwincoko isihloko sajika sasebenzisa amagama aphambili. Imihlathi yehlile njengoko ndandibaxelele abaphulaphuli ukuba bayeke ukukhathazeka malunga nokuxinana kwegama eliphambili kunye nokusetyenziswa kuwo wonke umxholo wabo. Ngelixa ndicinga ukuba igama eliphambili lilungile ukusebenzisa ngaphakathi kwesihloko sesithuba, ubukhulu becala ndiyakholelwa ukuba kungcono ukuba ujolise ekubhaleni kakuhle kunokuba uzame ukubhala kwiinjini zokukhangela.
Kwakungeyonyani kwiminyaka embalwa edlulileyo, thina Ku funeka yinkqubo ukuze iinjini zokukhangela ziqonde umxholo womxholo wethu. Kodwa yinkolelo yam ngoku ukuba ukuqhubela phambili kukaGoogle kuthatha ithoni yezinto eziguquguqukayo kuthathelwa ingqalelo- kubandakanya nembali yesiza, igunya lezihloko zombhali, izicatshulwa ezinje ngamagama egama, amagama emveliso kunye nejografi- ukumisela ukubaluleka, igunya kwaye ekugqibeleni udidi lwamaphepha.
Xa ndibuzwa ngabantu abaqala amashishini amatsha apho kufuneka bagxile kwintengiso yabo kwi-Intanethi, ukuthengisa ukukhangela kuhlala kufutshane nomphezulu wengcebiso. Ewe kuxhomekeke kwinqanaba leenjongo zabathengi okanye ibango lenkonzo entsha, okt bangaphi abantu abafuna iimveliso kunye neenkonzo. Ukubaluleka kokuthengisa ngokukhangela namhlanje kuboniswa yifographic yethu entsha eyenziwe ngu Ukuthengisa kweJBH. Ibonisa ukubaluleka kokutsala umzobo kwidatha yamva nje SimilarWeb kwinqanaba lemfuno yabathengi ngokukhangela kwaye kubandakanya neengcebiso ezibonakalayo kunye nohlalutyo kwezinye zeendawo eziphezulu zokufunda ngophendlo olufana nolo moz, Umhlaba weeNjini kwaye Iimpawu zokukhangela. UDave Chaffey
Le infographic iphula phantsi ubeko lomhlaba wentengiso yokukhangela kakuhle, kubandakanya zombini ukukhangela okuhlawulelweyo (Hlawula ngokucofa nganye) kunye uphando lwezinto eziphilayo (Uhlobo lwendalo). Intengiso yeinjini yokukhangela iseyeyona nto iphambili kwi-Intanethi kwaye akufuneki ihoywe. Ngelixa asingabo abalandeli abakhulu beshishini le-SEO kunye nezicwangciso zobuqhetseba ezisoloko zisetyenziswa ngabacebisi ezibeka abaxhasi babo emngciphekweni wokungafakwa kwizalathiso, isesisixhobo esomeleleyo kubathengi bethu ukuba babone ukuba bafuna ntoni kunye nendlela abaphendula ngayo kumxholo obhaliweyo kwaye kwabelwane ngawo kubathengi bethu 'kunye nezethu.
tags: 2015UDave Chaffeyjbhukukhangela intengiso ye-infographicukuqonda okuhlekukukhanyaimeko yentengiso yokukhangela